Ny fizotry ny hetsika lehibe manodidina ny sivana, ny fijirihana, ny DDOS ary ny fahalalahana an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 2:58 GMT
(Marihina fa tamin'ny 6 Aprily 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tahaka ny fitantarana sy ny sarintany ao amin'ny Threatened Voices , ny tanjon'ity tetikasa madinika ity dia mazava ho azy fa ny mamantatra ireo fironana amin'ny famoretana nomerika mandritra ny fotoana ary manasongadina ireo olana hafa izay matetika tsy taterin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Mifototra amin'ny tabilaon'ny Google izay nomeko ho an'izay rehetra mila izany ny lahatahiry voaangona nampiasaina ato amin'ity fitantarana Dipity ity.
Afaka mijery sy manitsy izany tsy mila kaonty ny olona rehetra. Azo alaina amin'ny endrika tahiry .xls na karazan-drakitra hafa ity vaovao ity, ary azo ampiasaina hamoronana fitantarana, sarintany ary karazana endrika lahatahiry hafa. Azo ampiasaina ho fitaovana hiarahana miasa hanaraha-maso ireo karazana hetsika lehibe ihany koa izy.
Noho izany miangavy anao mba hanampy anay hanangona izany vaovao manan-danja izany ary hanavao tsy tapaka ny fizotry ny tranga . Mandehana ao amin'ity tabilao Google ity ary ampidiro ireo hetsika tsy mbola ao.
Ny fizotry ny hetsika lehibe manodidina ny sivana, ny fijirihana, ny DDOS ary ny fahalalahana an-tserasera ao amin'ny Dipity.